Maalinta: Abriil 29, 2019
Wadooyinka Guddiga Qaranka Turkiga 29. Golaha Wakiilada ee caadiga ah ayaa la qabtay
Wadooyinka Golaha Qaranka Turkiga 29. Shirka Golaha Guud ee Guud waxaa la qabtay Sabtida Abriil 27. Golaha Guud, oo loo qabtay ka soo qayb galka Gudoomiyaha YTMK iyo Agaasimaha Guud ee Wadooyinka C / qaadir URALOĞLU iyo xubno ka tirsan YTMK, [More ...]
Kocaeli degmada Metropolitan by caddaalad ugu weyn ee buugga Turkey ee la 11 abaabulay. Bandhigga Buugga Kocaeli wuxuu noqon doonaa marxaladda mabda'a sannadkan. Qalabka weyn ee loo yaqaan 'mitir' 5 mitir ayaa lagu rakibayaa baarkinka gawaarida ee goobta bandhigga, shineemo gaariga [More ...]
Waxaa la aasaasay 2016, Khadka Duulimaadka-cusub ee Gayrettepe ee Magaalada Istanbul waa 1. Marxaladda 2019, 2. masraxa waxaa lagu bilaabi doonaa 2021. Laga soo bilaabo bartamaha magaalada illaa garoonka diyaaradaha ee Istanbul, oo ay dhistay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
4 Milyan Dollar Maalgelinta Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Shirkadda Koowaad ee Shiinaha
Mashruuca xadiidka xawaaraha sare ee Shiinaha ee ugu horreeya ee xawaaraha sare ee Bangiga Horumarinta Shiinaha, Bangiga Wershadaha Shiinaha iyo Ganacsiga, Bangiga Dhismaha Shiinaha, Bangiga Beeraha Shiinaha iyo laba shirkadood oo kale oo ah 4.18 bilyan oo doollar [More ...]
Rakaabka Marmaray ayaa daboolay fiilada korontada
Markii uu dacwooday wuxuu la galay saaxiibkiis magaalada Istanbul, qof fuushanaa Marmaray waxaana ku dhaawacmay koronto aad u sarreeya. Maamulka Gobolka Istanbul, oo saaxiib la ah eedeymaha ayaa galay qof Marmaray'ın koronto sare leh [More ...]
Batman-Diyarbakir Qeybta ku-xigeenka Boqol-Xuduudaha Wakiilada
Muwaadiniinta, maalin kasta, qiyaastii 15 kun oo qof ayaa safraya shabakadda tareenka ee Batman-Diyarbakir, oo si firfircoon uga shaqeysa gobolka, waxay dooneysaa in loo beddelo gaadiid tareenka RAYBUS. Batman iyo hal ku xigeen oo ka socda Diyarbakir TCDD General [More ...]
Kabaha Kumbiyuubka wuxuu bilaabay Gerede
Shaqo ayaa ka bilownay Mashruuca Teleferik, kaasoo ka mid ah mashaariicda cusub ee Duqa Magaalada Gerede Mustafa Allar. Esentepe, inta u dhaxaysa Goat Castle iyo Arkut Mountain Ski Center ee xariiqda mitirka 2500 [More ...]
Duqa magaalada AK Party Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar wuxuu sheegay inay fududeynayaan gaadiidka. Zeybek, sonunda Dhamaadka sanadkaan waxaan qorsheyneynaa inaan howl galno Qadka tareenka ee AFRAY Commuter wuxuu badali doonaa wajiga magaalada, ”ayuu yidhi. 31 bishii Maarso Doorashooyinka Afyonkarahisar [More ...]
Xarunta Taarikhiga ah ee Taariikhiga ah, oo xirneyd muddo seddex sano ah 2014 sababtuna tahay Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare, ayaa mar kale waxaa xirtay Agaasimaha Guud ee Maareynta Tareenka Waddooyinka sababta oo ah mashruuca saxiixa ee u dhexeeya Köseköy iyo Pamukova. Studies, [More ...]
RayHaber 29.04.2019 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 29.04.2019 ee nidaamkayaga.
7 Xayiraadda Qofka ee Tareenka
Waxay ku taalaa magaalada Tarsus Mersin, dadka 7 ee kudhaca xatooyo tareennada ayaa gacanta ku dhigay gacan-ka-hadal gaduud ah. Sida xogta lagu helay, kooxaha Taliska Saldhigga Yenice Gendarmerie, oo gaaf wareegaya wadada tareenka Adana-Mersin ee Atgirmez Quarter [More ...]
Gaadiidka adag ee ka hortagga burcad-badeednimada ee Alasehir
Waaxda Gaadiidka Dawlada Hoose ee Manisa, Alaşehir oo ka dhan ah gaadiidka budhcad badeedda, ardayda iyo adeegyada gaadiidka shaqaalaha ayaa la kormeeray. Baadhitaanka halka kantaroollada lagama maarmaanka ah loo sameeyo, milkiilayaasha gawaarida ee aan samayn [More ...]
Dalxiiska Dalxiiska Caalamiga ah ee 'Tour Of Mersin', oo ay soo qabanqaabisay Dowladda Hoose ee Magaalada Mersin sannadkan 5, ayaa ku dhammaatay tartamada maalinta afraad. 5 dhamaadka wareega. Safarka Mersin ee Baaskiillada Caalamiga ah Dhammaan Safarka [More ...]